Ukuvunywa, ukusebenzisana kunye nokuKhuthaza-IiMiliyoni eziMali
Ukuvunywa, ukuDibana kunye nokuKhuthaza
I-11 iminyaka yamava
Iiprojekthi ze1000 +
Abathengi bamanye amazwe
Ukuvunywa, ukusebenzisana kunye nokuKhuthaza
IBhunga eliHlangeneyo leNtlalontle labafuduki
IBhunga eliDibeneyo leNtlalontle yaBafuduki ngumbutho ozimeleyo ozimeleyo, okhankasela ubulungisa kunye nokulwa ucalucalulo kubantu abafudukayo kunye nomthetho nomgaqo-nkqubo wokubusa.
Umbutho wabacebisi abaLungiselelwe ngokufuduka
Abacebisi bethu ngokufudukela kwelinye ilizwe ngamalungu oMbutho wabaCebisi abaMiselweyo abaLawula uMfuduki ongumbutho oqeqeshelweyo wabacebisi abaMiselweyo base-United Kingdom. Injongo yombutho wabacebisi ngokufuduka abalawulwa kukukhuthaza ubuchwephesha kubo bonke abacebisi abafudukayo abalawulwayo kunye nokwakha intsebenziswano / ukulungelelanisa kunye nokuphucula unxibelelwano phakathi kwamanqanaba onke emibutho yabahlali, imibutho kunye namaziko.
Umbutho kulawulo lwabasebenzi
Abasebenzi bethu kwi-HR bangamalungu oMbutho kulawulo lwabasebenzi kwaye balandela ezona ndlela zibalaseleyo zabasebenzi kwi-Globalbe.
Umbutho weTekhnoloji yoLwazi eKhanada
Uncedo lwezoMthetho kunye nokuFudukela kwi-UK
Isigidi sabenzi kunye nabahlobo bethu basebenza egameni phantsi kweliso lamagqwetha eEEA ngokuthobela iCandelo lama-84 loMthetho Wokufudukela Kwindawo Yokukhosela ngo-1999. Sisebenzisana nabacebisi base-UK bezomfuduko abalawulwa yiOfisi yoMkomishinala weeNkonzo zokuFuduka (OISC). I-OISC inoxanduva lokulawula abacebisi bezokufuduka phantsi kweKhowudi yeMigangatho neMigaqo yoMkomishinala.
Uncedo lwaseMelika Olungelulo oluFudukayo kunye noMfuduki
Amagqwetha ethu afanelekileyo aseMelika angamalungu oMbutho wamagqwetha aseMelika kwaye angamalungu eAmerican Immigration Lawyers Association (AILA), asekwa nge-14th ka-Okthobha u-1946 kwaye ngumbutho wokuzithandela wamagqwetha kunye namagqwetha angaphezu kwe-15.000 kunye noonjingalwazi bezomthetho abenza kwaye bafundise umthetho wokufuduka.
Uncedo loFuduko lweAustralia
Abacebisi bethu bezokufuduka baseOstreliya kunye namagqwetha abhalisiwe kwiGunyabantu eliBhalisayo lokuBhalisa (i-MARA) eliqumrhu elisemthethweni lokubhalisa labacebisi bezokufuduka base-Australia njengoko kufunwa ngumthetho wase-Australia.
Abacebisi ngokufudukela kwiCanada yeCanada yokuLawula
Abacebisi baseKhanada abafudukayo ababonelela ngeenkonzo zokufuduka kubaxumi bethu bangamalungu eBhunga labaFuduki beBhunga laseCanada. AbaCebisi bezokuNgena kwiKhansile yoLawulo yaseCanada (ICCRC) (eConseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada (CRCIC) ligunya elilawulayo elizweni lonke elenziwe nguRhulumente waseKhanada ukuba lijonge kwaye likhusele abathengi abafuna iinkonzo zaBacebisi base Canada.
Umbutho weCounselling waseLatin America
Oogxa bethu abasebenza kwiLatin America bangamalungu e-LACCA. Umbutho waseLatin American Corporate Counsell uzisa kunye abakhokelayo kwiingcebiso ezindlini ezisebenza kule ngingqi, ibanike ithuba lokunxibelelana, babelane ngezimvo kunye nezona ndlela zilungileyo zokunxibelelana kunye nontanga kwiLatin America iphela.
Inkonzo yaseYurophu yezomthetho Injongo ephambili kukubonelela ngokhuseleko kwezomthetho kubemi, kwimibutho nakwiinkampani.
Amaqhinga obuchule kwi-Intanethi
Umbulelo okhethekileyo kuThumela kunye, ngenkxaso yabo kunye nokuthembela kuthi.
Sisandula ukukhankanya ezimbalwa kuqinisekiso lwethu kunye noBuhlakani.
Ngezizathu zobungcali, kunzima kakhulu ukuchaza yonke imibutho yethu, kodwa, sizinikezele ekuboneleleni ngenkxaso kunye nenkonzo efanelekileyo, yokuba niphumeze iinjongo, izilangazelelo kunye neenjongo, phantse naphi na emhlabeni emhlabeni ngeyona nto intle yamaxabiso. ubume bemirhumo.
* Qaphela Asisamkeli isabelo apho sinokuthandabuza okuncinci ukubonelela ngesiqinisekiso esifanelekileyo senkonzo.
Isigidi sabenzi bemveliso sinye sesisombululo sokubonelela ngesisombululo kumashishini anokuthi ancede ishishini lakho kungekuphela nje kwizisombululo ze-IT kodwa nokwandisa ekhaya kodwa nakwamanye amazwe, kungaphelelanga nje ekuphuhlisweni kweWebhu, izisombululo ze-Ezoqoqosho, ukuphuculwa kweeSoftware, ukuthengisa kwidijithali, isisombululo sesoftware kunye Ukuphuhliswa kwe-tecnology ye-blockchain kunye nokuphunyezwa kweshishini lakho ngexabiso eliphambili, kodwa, sikwabonelela ngesisombululo sokugqibezela ukuhlawula isango lokuhlawula, iinkonzo zomthetho, ukubonisana ngezemali, izisombululo ezenziwe ngokweHR, ukubandakanya inkampani nakweziphi iindawo ezingama-98 ezilungele iimfuno zeshishini lakho, ukuvula iiakhawunti zebhanki, ubhaliso lwentengiso kumazwe angama-119 ngefom yesicelo esinye, ukubiza ezimbalwa.
Besikwisiqalo, yiyo loo nto, siziqonda iimfuno, ucwangciso noqeqesho olufunekayo, iintlungu. Siyanceda, sinika inkxaso kwaye sibaQeqeshele ii-Start-ups ukuya kwicala elililo kwelona xesha likhawulezayo linokubakho kunye neendleko ezisezantsi kakhulu.
Inkxaso yokuFumana abaxumi
Ukufukama kunye neNkxaso mali
Sinethiwekhi enkulu kakhulu yabatyali-mali bamanye amazwe, ngenxa yoko, njengenkxaso, sikwanceda ukudibanisa ukuqala kwethu kunye nabatyalomali abanokubakho.
Sithathe iminyaka yamava ukugqibezela ubuchule bethu kunye nemibutho yehlabathi kunye nobambiswano ukubonelela ngeenkonzo ezigqwesileyo kunye nezisombululo kubathengi bethu ngamaxabiso oKhuphiswano.
Sidala amathuba abantu kunye neeNkampani zokufumana iinkqubo ezingcono, ezenziwe ngokwezifiso kunye nezisombululo ezenziwe.
Imalunga nawe. Siya siqhelana nawe, ishishini lakho kunye neenjongo zakho kakuhle ngaphambi kokuxoxa ngeendlela ezinokubakho okanye amathuba.
Ngamava ethu amakhulu kunye neenkonzo ezahlukeneyo ezibonelelwe yinkampani yethu, sinceda abantu, iintsapho, amashishini kunye nabarhwebi ngobungcali bethu bokuhambisa, ukuxhasa, ukwandisa nokukhulisa, sikwindawo entle ukukukhokela kwindlela eya empumelelweni. Nokuba unomdla wokufudukela kwenye indawo, ukudibanisa kunye nokufumana okanye ukukhangela kwi-ofisi yakho yangasemva, ukukhangela imali okanye iqabane lobuchule okanye ujonge isicwangciso sokulandela isizukulwana esilandelayo, ukubonisana ngemali kunye nenkxaso, okanye ujonge iinkonzo zepropathi yendawo ethengisa izindlu okanye iinkonzo ezinxulumene nokufuduka. okanye imfundo yaphesheya okanye izisombululo ze-IT sinokukunceda kuzo zonke iinkonzo esikhoyo zokuxhasa
Njengomntu okanye umnini okanye inqununu yeshishini elizimeleyo okanye elihlanganayo, wonke umntu ucelwa umngeni kungekuphela nje ngenkqubo yokulawula imisebenzi yemihla ngemihla, kodwa, ngokudibeneyo nokuqinisekisa impumelelo yethuba elifutshane kunye nexesha elide. Kodwa njengoko iindleko ziya zisanda kwaye iimfuno zokuthobela zidala imiceli mngeni emikhulu, ungashiywa ucinga ukuba uza kuqhubeka njani nobomi-ungasathethi ke ngokuphumelela - ngeli xesha litsha, kulapho singena khona.
Indlela yethu yeNyathelo ngeNyathelo -Ukuqala ukuya empumelelweni
Isinyathelo 1: Chonga iimfuno zaBantu / zoSapho / zeShishini / zoShishino.
Isinyathelo 2: Ukukhethwa kwamathuba / ukhetho oluphambili lokufezekisa iiNjongo kunye neenjongo.
Isinyathelo 3: Kuthunyelwa ukhetho oluphambili lokuvunywa.
Isinyathelo 4: Ukuba kunokwenzeka, ukubeka iliso kutyelelo kwilizwe, ukuba alikho.
Isinyathelo 5: Funda ukuba kunokwenzeka.
Isinyathelo 6: Iingcebiso ngezezimali kunye nerhafu, ukuba ziyasebenza.
Isinyathelo 7: Isishwankathelo kunye nengcaciso eneenkcukacha ngamathuba anokwenzeka.
Isinyathelo 8: Ukubekwa esweni kwinkqubo.
Isinyathelo 9: Ukulungiselela kunye nokungenisa kumagunya afanelekileyo.
Kubaluleke kakhulu ukukhetha iqabane elifanelekileyo kwiinjongo zakho,
Abaxhasi bethu lusapho lwethu kwaye sihlala sime abathengi bethu ngovelwano kunye nomonde ukuqinisekisa ukuba bayaphumelela.
Isigidi sabenzi besibonelelo esisodwa sokumisa, sinika izisombululo ezenziwe ngokwezifiso kunye nezenzelwe abantu, iintsapho, amashishini kunye neenkampani ezinceda wena kungekuphela kwekhaya kodwa nakwamanye amazwe ngemicimbi enxulumene nokufuduka, umtyali-zimali, ukufudukela kwelinye ilizwe, ishishini, iimvume zomsebenzi , ubumi, imfundo yamanye amazwe, ukubonisana ngeshishini, izisombululo zeshishini, ukubekwa kwamazwe ngezisombululo, isisombululo seHR, ukuthengisa kunye nokuthenga ishishini, izisombululo zeCRM, isango lokuhlawula, ukumiselwa kwenkampani kwimimandla engama-98, ukuvulwa kweakhawunti yebhanki, ubhaliso lwentengiso kumazwe angama-119 ngesicelo esinye nje Ifom, iphepha-mvume lokushishina, iiofisi ezibonakalayo, amanani abonakalayo, ukwandiswa kwamazwe, iinkonzo zomthetho, ukucebisa ngezomthetho, ukucebisa ngezemali, ukucebisa ngezindlu, ukujika ukuthembisa, izixhobo kunye nokusebenza kwemali eyimali, ukukhuthala nokuthobela, sikwabonelela nangokubonelela Izisombululo ze-IT ezenziwe ngokwezifiso njengokuphuhliswa kwewebhu, i-Eco izisombululo ze-mmerce, ukuPhuhliswa kweeSoftware, ukuthengisa kwidijithali, izisombululo zesoftware kunye nophuhliso lwetekhnoloji yeBlockchain ukubiza ezimbalwa ngamaxabiso akhuphisanayo ..
Iinkonzo zethu ze-IT zinikezelwa kuluhlu olubanzi lwamashishini azo zonke iintlobo kunye nobukhulu. Sibonelela ngale mizi mveliso ilandelayo:
Inkqubo yokuSebenza ngaphandle kwenkqubo
Amaseko okwakha kunye nolwakhiwo
Uhambo kunye nezokhenketho
UPhando kunye noPhuculo
Umzi mveliso we-Crystal
Imveliso yezoLimo kunye noPhando
Sinikezela iinkonzo kunye nenkxaso kwezi ndawo zichazwe ngezantsi: